Guurka Sacuudiga iyo qaxootiga Suuriya - BBC Somali - Aqoon Guud
Guurka Sacuudiga iyo qaxootiga Suuriya
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 20 Mey, 2013, 21:34 GMT 00:34 SGA
Gabdhaha reer Suuriya ayaa ah gabdho aad u qurxan markii ay ka soo qaxeen dagaalka ayaa saboolnimo darteed ay reerkoodii ka iibinayaan niman ka waawayn.
Xaalaada adag ee dadka ka soo qaxay Suuriya ayaa wali sii socota. Hayadda Qaramada Midoobay ee qaxootiga UNHCR waxay ku qiyaastay in nus milyan qaxooti Suuriya ah inay ku nool yihiin dalka Urdun oo kaliya.
Ma jiro gargaar ku filan qaxootiga tirada badan ee imaanaya waxayna qaarkood qaadanayaan talaabooyin adag oo ay ku badbaadaan.
Wariyaha BBC Beth MCLeod ayaa waxay ka waramaysaa in reero qaar ay gabdhahooda yaryar u guurinayaan niman waawayn si ay lacag uga helaan.